Ciidanka Amniga oo Gacanta ku soo dhigay Labo dhagarqabe oo ka tirsan Alshabaab. | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Ciidanka Amniga oo Gacanta ku soo dhigay Labo dhagarqabe oo ka tirsan...
Ciidanka Amniga oo Gacanta ku soo dhigay Labo dhagarqabe oo ka tirsan Alshabaab.
Muqdisho(SNTV):– Ciidamada Amniga oo howlgal qorsheysan ka fuliyay Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir ayaa gacanta ku soo dhigay labo dhagar-qabe oo ka tirsan Argagixisada Alshabaab. sida uu sheegay Taliska NISA.
Warkan ka soo baxay Taliska Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda Qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay in howlgalkan uu dhacay habeen hore Kaas oo ahaa mid lagu sugayay Nabad-galyada Shacabka, Islamarkaana ay Ciidanka amniga gacanta ku soo dhigeen labadaasi dhagarqabe.
“Habeynimada 23ka Agoosto, ciidanka Nabadgelyada Dowlada Federaalka ah ayaa Degmada Wadajir waxay howlgal kusoo qabteen labo shakhsi oo argagaxisada Alshabab ah. Howlgalkaan oo lagu sugayay nabadgelyada dadwaynaha soomaaliyeed, cidna wax kuma noqon.”ayaa lagu yiri Warkan ka soo baxay NISA
Magaalada Muqdisho iyo qaar kamid ah Gobolada Dalka waxaa ka socda Howlgalo ay wadaan Ciidamada Amniga,iyagoo ku guuleestay inay ka hortagaan dhibaatooyin badan oo Argagixisada ay la maaganaayeen shacabka Soomaaliyeed.
Previous articleTaliyeyaasha Ciidanka Booliska iyo Asluubta oo Ciidanka ku sugan duleedka Muqdisho la qeybsaday Farxadda Ciidul Adxaa
Next articleQurba joogta Soomaaliyeed oo loogu baaqey in ay ka qeyb qaatan dib u dhiska dalka iyo taageerada ciidamada